ထောင်ထဲမှ ခေါင်းဆောင်များ မွေးထုတ်ပေးခြင်းသည် ကြည်ညိုစရာ ကောင်းသော်လည်း ခေတ်ကောင်းချိန်တ? - Yangon Media Group
ထောင်ထဲမှခေါင်းဆောင်များမွေးထုတ်ပေး ခြင်းသည် ကြည်ညိုစရာကောင်း သော်လည်း ခေတ်ကောင်းချိန်တွင် တက္ကသိုလ်များမှသာ ခေါင်းဆောင်များကို မွေးထုတ်ပေးရမည်ဟု မြန်မာ့မဟာဗျူဟာနှင့်မူဝါဒလေ့လာမှုအဖွဲ့ (ISP) အမှုဆောင် ဒါရိုက်တာ ဦးမင်းဇင်က ပြော ကြားသည်။ အောက်တိုဘာ ၁၈ ရက်တွင် ပြုလုပ်သည့် ယောမင်းကြီး ဇရပ်ခါးပတ်တစ်ကွင်းလမ်းတစ်စင်း မြန်မာ့အကျိုးစီးပွားအသာရ ဖို့စကားဝိုင်းအစီအစဉ်တွင် ဦးမင်းဇင်က ပြောကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
”လူတွေဟာခေါင်းဆောင် မွေးချင်လို့ရှိရင် ခေါင်းဆောင် ကောင်းဆိုတာ ဘဝတက္ကသိုလ်လို့ ခေါ်တဲ့ထောင်ထဲကပဲ မွေးနေရသလို ဖြစ်နေတယ်။ ထောင်ထဲကနေ ခေါင်းဆောင်တွေကို မွေးထုတ် ပေးရတာ အင်မတန်မှ လေးစား ကြည်ညိုစရာကောင်းပါတယ်။ ဒါ ပေမဲ့ ခေတ်ကောင်းလာတဲ့အချိန်မှာခေါင်းဆောင်တွေကို တက္ကသိုလ်ကမွေးတဲ့ဟာမျိုးဖြစ်အောင် ကျွန် တော်တို့ကြိုးစားချင်ပါတယ်။ ဒါဟာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အဓိကရည်ရွယ်ချက်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ခေတ်မကောင်းတဲ့အချိန် ခေါင်းဆောင် တွေကို ထောင်ထဲကမွေးဖွားတာ ကို ကျွန်တော်တို့အလေးအနက် ပြုတယ်၊ ဒါပေမဲ့ ခေတ်ကောင်း လာတဲ့အချိန်မှာ ခေါင်းဆောင် တွေကို တက္ကသိုလ်တွေကပဲ မွေး ဖွားရမယ်လို့ ကျွန်တော်တို့ယုံ ကြည်တယ်”ဟု ၎င်းကပြောသည်။
သုတေသန စာတမ်းတင်ရမည့်ကဏ္ဍများမှာနိုင်ငံရေးနှင့်ပတ် သက်သည့်ကိစ္စများ၊ တရားဥပဒေ စိုးမိုးရေး လူ့အခွင့်အရေး၊ ဒေသန္တရ အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာ၊ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေးနှင့်သဘာဝပတ် ဝန်းကျင်၊ တိုင်းရင်းသားအရေးငြိမ်းချမ်းရေးနှင့်ဆင်းရဲမွဲတေမှုကို ပပျောက်အောင် အကြံပြုလိုသည့် စီးပွားရေးနှင့်သက်ဆိုင်သော သု တေသနအကြံပြုစာများ၊ နိုင်ငံခြားဆက်ဆံရေးတို့ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါသုတေသနအကြံပြုစာတမ်းအစီအစဉ်အတွက် ၁။ တက္ကသိုလ်၊ ကောလိပ်များတွင်ဘွဲ့ဒီဂရီအတွက်တက်ရောက်နေသည့် ကျောင်းသားများ၊ ၂ ။တက္ကသိုလ်၊ ကောလိပ်များမှ ဖွင့်လှစ်ထားသောသင်တန်းများတွင် ဒီပလိုမာလက်မှတ်အတွက်တက် ရောက်နေသော ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများ၊ ၃။ပုဂ္ဂလိက ကျောင်းများ၊ သင်တန်းများတွင် တက်ရောက်နေသော ကျောင်း သား၊ ကျောင်းသူများ လျှောက်ထားနိုင်ကြောင်း၊ တစ်ဦးချင်းစီ အနေဖြင့် လျှောက်ထားသည်ကို လက်ခံသော်လည်း နှစ်ဦးကနေ ငါးဦးထိ ပူးတွဲလုပ်ကိုင်သော သု တေသနအဆိုပြုလွှာများကို ပိုမိုအားပေးလိုကြောင်း ဦးမင်းဇင်က ပြောသည်။
”အဆိုပြုလျှောက်လွှာစတင် ရမယ်၊ ISP နှင့် တိုက်ရိုက်မသက်ဆိုင်တဲ့ ပြင်ပပညာရှင်များဖြင့် အဖွဲ့ဖွဲ့ကာ လျှောက်လွှာများကို ရွေးချယ်မယ်။ ပဏာမရွေးချယ်ခံရသည့် လျှောက်လွှာများအတွက် သုတေသနပြုလုပ်ရန် လုံလောက်သည့်ထောက်ပံ့ကြေး ပေးသွားမယ်”ဟု ၎င်းက ပြောသည်။ ယင်းနောက် သုတေသန ပထမမူကြမ်းကို တင်ပြရမည်ဖြစ် ကာသက်ဆိုင်ရာပညာရှင်များဖြင့် စိစစ်၍ မှတ်ချက်ပြုပြီး ထပ်မံရွေး ချယ်မည်ဖြစ်ကြောင်း၊ရွေးချယ်ခံရသူများကို သုတေသနဆိုင်ရာ သင်တန်းတိုတစ်ခုကို ပေးမည်ဖြစ် ကာ လေ့လာရေးခရီးစဉ်တစ်ခု စေလွှတ်မည်ဖြစ်ပြီး လက်ကျန် သုတေသနထောက်ပံ့ကြေးအပြည့် ပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ တတိယအဆင့်အနေဖြင့် သုတေသနမူကြမ်း ကို အချောသတ်မည်ဖြစ်ပြီး ISP က ထုတ်ဝေသည့် Myanmar Quarterly Journal တွင် ဖော်ပြပြီး စာမူခပေးအပ်မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
”ပညာသာရှေ့သွားရှိတဲ့ ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ချင်ရင် သုတေသနအလုပ်ဟာ ဖယ်လို့မရတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်” ဟု ဦးမင်းဇင်က ပြောသည်။ သုတေသနအလေ့အထ၊ ကျွမ်းကျင်မှုနှင့်ဓလေ့ထွန်းကား ရေးကို တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအထောက် အကူပြုစေရန်၊ လူငယ်များ (အထူးသဖြင့် နယ်ဒေသ၊ တိုင်းရင်းသားဒေသများ)အတွက် တတ်စွမ်းသမျှအခွင့်အလမ်းဖွင့်ပေးပြီး လူငယ်အချင်းချင်းပညာရေးအပေါ် အခြေပြုချိတ်ဆက်မိရုံမကကျယ် ပြန့်သည့် အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်း၊ နိုင်ငံရေးပါတီ၊စီးပွားရေးအသိုင်းအဝိုင်းနှင့်ချိတ်ဆက်မိပြီး ဘဝရွေးချယ်မှုကို ပိုမိုအထောက်အကူပြု စေရန်၊ ခေါင်းဆောင်များကို တက္ကသိုလ်များထဲမှ ပေါ်ထွက်လာ စေရန် ခေတ်မကောင်းသည့်အချိန်တွင် အကျဉ်းထောင်ထဲမှ ခေါင်းဆောင်များ မွေးဖွားပေါ်ထွက်လာသကဲ့သို့ ခေတ်ကောင်း လာသည့်အချိန်မှာ ခေါင်းဆောင်များကို တက္ကသိုလ်များထဲမှသာ မွေးဖွားလာစေရန် ယင်းအစီအစဉ်ကို ပြုလုပ်ရခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ရန်ကုန် တိုင်းဒေသကြီး အပါအဝင် တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ် ရှစ်ခုတွင် ညအပူချိန်များ တိုးနို??
တမူးမြို့ပေါ် ၌ မြေပိုင်ဆိုင်မှု မရှိသည့် အိုးမဲ့အိမ်မဲ့ ပြည်သူများကို မြေကွက် ချထားပေးသွား??